'हजार जुनीसम्म'को बारेमा के भन्छन निर्देशक विकाश राज आचार्य – Namaste Filmy
‘हजार जुनीसम्म’को बारेमा के भन्छन निर्देशक विकाश राज आचार्य
ट्रेलर सार्वजनिक भएसँगै दर्शकले नोटिस गरिरहेका छन् , हजार जुनीसम्मलाई । युट्युबमा ट्रेलर आएको १० दिनको अन्तरालमा यसलाई १० लाख बढीले हेरिसकेका छन् । फिल्मलाई चर्चित सिरिज ’नाई नभन्नु ल’ विकाश राज आचार्यले निर्देशन गरेका हुन् । लेखक हुँदै निर्देशनमा आएका विकाशले केहि वर्ष यता नाइँ नभन्नु ल सिरिजलाई नै अगाडी बढाई रहेका छन् । तर , यतिबेला उनले आफ्नो व्यानरबाट पर हटेर ’हजार जुनीसम्म’ निर्देशन गरेका छन् । टिम उस्तै भएपनि मर्म भने केहि फरक छ । यसपटक कथ्य शैली नै भिन्न रहेको विकाश बताउछन् ।
हजार जुनीसम्म नै किन ?
नाई भन्नु ल नै सफल भईरहदा विकाशले अरु काम गर्दैन भन्ने चर्चा पनि हुन्थ्यो । मलाइ पनि बाहिरको व्यानरमा काम गर्न मन न लाग्ने होइन , तर टिम मिल्नु पर्छ । म तयार थिए र टिम बन्यो त्यसपछि हामीले हजार जुनीसम्मलाई तयार गर्यौ । कथाको डिमाण्ड अनुसार नै कलाकारलाई चयन गर्यौ । नाई नभन्नु ल सिरिज केहि सेन्टिमेन्टल पनि छ , यसलाई भने रमाइलो फ्यामिली ड्रामा बनाउ भनेर पनि यो तयार गरेका हौ । प्रेम उहिँ हो , पारिवारिक ड्रामा नै हो तर पनि प्रस्तुतीकरण र कथ्य शैली भने फरक छ ।
के यो नाइँ नभन्नु ल ६ हो ? , भन्ने चर्चा पनि चलिराछ नि ?
नाई नभन्नु ल भन्ने वितिकै एउटा सेन्टिमेन्टल सिरिज नै दर्शकको अपेक्षा हुन्छ । एउटा छुटै छाप परिसकेको छ त्यसको । तर , यो रमाइलो पारिवारिक फिल्म हो । नाई नभन्नु ल सिरिज रुचाउने दर्शकलाई यो त मन पर्छ नै साथै एउटा कलरफुल फिल्म रुचाउने दर्शकले पनि यसमा इन्जोय गर्नु हुन्छ । मेरो प्याटर्न त छ नै तर यसपटक केहि नयाँ पनि छ ।
नाई नभन्नु ल कै अधिकांस कलाकार छन् नि ?
हो । किनकी एक पटक टिम वर्क भएको कलाकारसँग काम गर्न निकै सजिलो हुन्छ । अनि नयाँ सदस्यको रुपमा सलोन बस्नेत र डेब्यु ब्वाई अखिलेश प्रधान हुनुहुन्छ । म प्राय काम गर्दा मलाइ बुझोस् भन्ने लाग्छ , एक पटक काम गरिसकेकाले बुझिसकेका हुन्छन । साथै , हाम्रो व्यानरबाट नयाँ प्रतिभाले मौका पाओस भनेर नै हामी नयाँ अनुहारको खोजिमा हुन्छौ । तर , हजार जुनीसम्म फिल्म हेर्नु भयो भने तपाईले बुझ्नु हुन्छ । हामीले चयन गरेको कलाकार र उनीहरुले निर्वाह गरेको भूमिकाको विकल्प नै छैन । नाई नभन्नु ल सिरिजकै अधिकांस कलाकार किन भन्ने प्रश्नको जवाफ फिल्मले नै दिन्छ ।
सिरिजबाट बाहिर आउँदाको अनुभव ?
नाई भन्नु ल पनि सिरिज हो सिक्वेल होइन । त्यसैले त्यहाँ पनि कथा विभिन्न तरिकाले प्रस्तुत गरेका थियौ । यस पटक पनि त्यहि हो । हामीले केवल प्याटर्न फरक गरेका हौ । त्यसैले त्यस्तो फरक हुँदैन , मलाइ । तर , म आतुर छु कि दर्शकले कस्तो प्रतिक्रिया दिनु हुन्छ । फिल्मलाई मन छुने बनाएको छु । यसमा हासो , रोदन , माया , पारिवारिक दायित्व सबै मिश्रित छ । साउन ३० मा लाग्दैछ , त्यसैले आतुर छु ।
फिल्ममा आर्यन सिग्देल , स्वस्तिमा खड्का , सलोन बस्नेत , संचिता लुइँटेल , शिवहरी पौडेल , अखिलेस प्रधान , संचिता लुइँटेल र अनुभव रेग्मी लगायतको अभिनय रहेको छ । फिल्मलाई प्रेम कथामा आधारित फ्यामिली ड्रामा भनिएको छ । निर्देशक आचार्यले फिल्मको पटकथा सामिप्यराज तिमल्सेनासंगको सहकार्यमा तयार पारेका हुन् । फिल्ममा आर्यनसंगै स्वस्तिमा खड्का , संचिता लुइँटेल , शिवहरि पौडेल , सलोन बस्नेत , अनुभव रेग्मीसंगै अखिलेस प्रधानको अभिनय रहेको छ । फिल्ममा कविराज गहतराजको नृत्य , उदयराज सोताङ्ग, राजनराज सिवाकोटी, बसन्त सापकोटा र प्रविन पौडेलको संगीत, अर्जुन जिसीको सम्पादन छ । यसमा विशाल चाम्लिङ निर्माता छन् भने कार्यकारी निर्मात्री कविता रेग्मी हुन् । फिल्म आउँदो साउन ३० मा रिलिज हुँदैछ ।
मिलन डी काप्रीको निर्देशनमा बन्ने भयो चलचित्र ‘षट्कोण’
‘अवतार’मा अफर आएको भनेपछि खिल्ली उडाउदै ट्रोल बनाए पछि गोविन्दाको यस्तो जवाफ